Homeसमाचारहेर्दाहेर्दै आँखै अगाडी उनि ल’डिन, अचम्मित बने गाउँलेहरु (लाइभ भिडियो सहित)
February 11, 2021 admin समाचार 3632
राती चि’हान खन्ने झाक्रीलाई काली चढेकी महिलाले नसोचेको ता’न्डब देखाउदै अ’चम्मै गरेकी छिन । झाक्री नै डरा’एका छन । झाक्रीलाई नै सम्हा’ल्न हम्मे हम्मे परेको थियो । हेर्नेहरुको भिड एकाएक बढ्यो । झाक्रीको घरमा प’छिल्लो समय निकै भिड बढ्न थालेको छ । टाढा टाढादेखि धेरै मानिसको आ’गमन हुन्छ ।
आज सयौको संख्यामा आएका मानिसहरुको समस्या’ र जोखाना हेर्दै गरेका झाक्रीमाथी नसो’चेको कुरा भएको छ । पाँच जना माताहरुको टोली झाक्रीको घरमा पुगेर काम्न थालेर झाक्रीलाइ नै घे’रेपछी सबै मानिस ड’राउदै भागेका थिए । एक युवती झाक्रीमाथि उ’क्लिएपछी झनै माहोल अर्कै बनेको छ ।
केही दिन अगाडीबाट मोरङमा धेरै युवतीहरु ‘बिरामी पर्दै मुर्छा पर्न थालेपछी धेरै झाक्रीले चिन्ता बसे तर कसैले पत्ता लगाउनै सकेनन । उल्टै झाक्री नै ढ&लेपछी झनै गम्भीर अवस्था सि’र्जना भएको र अन्त्यमा ताप्लेजुङका झाक्री कृष्ण बिकलाई बोलाएर चिन्ता बस्न सुरु गरेर चार दिन चार रात न’सुती धामी बसेर ढ्याङ्रो बजाएपछी अन्त्यमा छ बर्ष पहिले मोटरसाइकल दुर्घटनामा नि’धन भएका जीवन राईको चि’हान खनेर हेर्नुपर्ने भनेर झाक्रीले भनेपछी सुरक्षाकर्मी र गाउले बु’द्धिजिबि सहित करिब दुई सय मानिसहरुले रातको १२ बजे चि’हान खनेका थिए ।
सुरुमा छिटो पत्ता लगाउनुपर्छ भन्दै झाक्रीलाई नै हा’तपा’त गरेको समाजले चि’हानमा हेर्दा कसैले न’सोचेको दृश्य देखिएपछी धामीलाई नै माफी मा’गेर सम्मान समेत गरेका थिए । आत्मा पसेर युवतीको टाउको घुम्ने, खुट्टा ब’टा’रिने जस्ता ड’रलाग्दा क्रियाकलाप देखिएपछि सबै ड’राएर राती सुत्न समेत नसकेको गाउलेहरुले बताए ।
झाक्रीले सबै कुरा निर्मुल पारेको बताएर सबै खुशी बनाएका थिए । आज अचानक झाक्रीको घरमा काली माता च’ढेकी महिलाले नसोचेको काम गरेकी छिन । झाक्रीलाई बान हान्दै आउँदा झाक्रीले रि’साएर महिलालाई भुइँमा प’छारेका छन । आज मन्दिर भित्रै पसेपछि झाक्रीले मन्दिरभित्र नै ढा’लेका छन । ए’क्कासि महिलाको टाउको घुम्यो खुट्टा ब’ट्टारियो झाक्री नै आ’त्तिए । झाक्री र काली चढेकी महिलाको एकाएक भि’ड’न्त भएको छ ।
March 29, 2021 admin समाचार 2099
May 17, 2021 admin समाचार 2197
June 1, 2021 admin समाचार 1085
पर्सा जीराभ’वानी गापा ५ स्थित दलित बस्तीका वृद्ध जयकिसुन पासवान भन्छन्, ‘पोहोर त ढिलै भए पनि मु’खिया ९वडा अध्यक्ष० जीले चामल दाल ल्याएर दिए, यसपालि त अहिलेसम्म ना’कमुख पनि देखाउन आएका छैनन् । महिना दिनदेखि
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (205228)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (196611)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (196113)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (195965)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (194404)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (194101)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (192337)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (191916)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (184745)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (161422)